Kitra - Fifindrana mpilalao :: Tsiriritina klioba malaza any Etazonia Raveloson Rayan • AoRaha
Tsara famaranana ny taom-pilalaovana ho an-dRaveloson Rayan, mpilalao baolina kitra malagasy ao amin’ny Estac Troyes, any Frantsa, satria tafakatra ao amin’ny “Ligue 1” ho an’ny taom-pilalaovana manaraka. Taorian’izany dingana tsara vitany izany, betsaka ireo klioba lehibe mitsiriritra sy mitady fatratra ity irakiraka mpiaro malagasy, 24 taona, ity.
Klioba fanta-daza ao amin’ny diviziona voalohany any Etazonia no efa mitily an-dRaveloson Rayan, amin’izao fotoana izao. Klioba iray hafa mifaninana ao amin’ny “Ligue 1” any Frantsa koa no manana eritreritra ny haka azy, amin’ny taom-pilalaovana manaraka. Tonga hatrany Alemaina ny fitiliana an’i Rayan, ka ekipa roa mivoatra amin’ny “Bundesliga” no mikatsaka azy. Mbola tsy misy kosa aloha, hatreto, ny fifanaovan-tsonia fifanarahana fifindrana nataony, fa mbola isan’ny mpilalaon’ny Estac izy. Tsiahivina fa ho tapitra amin’ny faran’ny volana jona 2021 ny fifanaraham-pilalaovany ao amin’ny Estac Troyes.
Anisan’ireo nisongadina sy nanome tosika be nahatafita ny ekipan’ny Troyes amin’ny diviziona voalohany any Frantsa i Rayan. Tompontoerana hatrany izy, tamin’ny fihaonana rehetra natao. Mpilalao feno ny tovolahy satria sady mahavita miaro ary koa mandrindra lalao eo afovoan’ ny kianja ary manao fanafihana. Nahavita lalao efatra amby telopolo ny tovolahy, tamin’ny fiadiana ny ho tompondaka “Ligue 2”. Baolina iray no nampidiriny tamin’izany.
Fifindra-monina an-tsokosoko :: Voasambotra ilay vehivavy nanondrana olona valo tsy hita popoka
Basketball – «Africa League» :: Mihatery ny lalan’ny zandary malagasy any Rwanda